Igbo, John: Lesson 095 - Ụwa kpọrọ Kraist na ndị na-eso ụzọ ya asị (Jọn 15:18 - 16:3) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 095 (The world hates Christ)
1 Ihe ndia ka M'gwaworo unu, ka ewe ghara ime ka unu ma n'ọnyà. 2 Ha gēme kwa ka unu pua n'ulo-nzukọ nile. Ee, oge na-abịa na onye ọ bụla nke gburu gị ga-eche na ọ na-ejere Chineke ozi. 3 Ha ga-eme ihe ndị a n'ihi na ha amaghị Nna, ma ọ bụ m.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na a ga-akpọ ha asị n'ihi ihe atọ: N'ihi na amu ha site na Chineke, obughi nke uwa.Nihi na ndi mmadu amatagh Kraist, Okpara Chineke ma obu onyinyo Chineke.
Ndị isi okpukpe ahụ amaghị ezi Chineke ahụ, ofufe ha bụkwa chi a na-amaghị ama.
O doro anya na ịkpọasị hell ka na-aga n'ihu. Onye chighariri na Nna nke Onyenwe ayi Jisos Kraist gburu ndi ndi ntoro madu dika onye si n'ezi ofufe dapu n'ebe obula o huru, n'eche na ha nejere Chineke ozi. N'eziokwu, ha na-ejere Ekwensu ozi. Ha amaghi na ezi Chineke bu Nna di nso; ha enweghi ike nke ọbara nke Kraist.
Ha enweghị ike nke Mmụọ Nsọ. Ya mere, onye nke ndi ozo neme ka ha laa ndi nnochite anya Atọ n'Ime Otu nso site na mkpagbu, igbu mmadu na ule di iche iche. Otú a ka ndi Juu di, otú a kao gaab kwa rue mgbe Kraist gaabia.
Echela na ọdịnihu ga-aka mma n'ihi na ihe a kpọrọ mmadụ ga-agbakwunye na ụlọ ahịa ya nke ihe ọmụma na ìhè. Ee e, mmụọ abụọ na-agba mgba ga-anọgide n'ụwa ruo ọgwụgwụ: Mmụọ nke si n'elu, na otu site n'okpuru. Enweghi uzo di n'etiti eluigwe na oku. Ma ị ga-abanye n'ụzọ zuru ezu n'ime mmekọrịta gị na Nna ahụ, Ọkpara ahụ na Mmụọ Nsọ, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị daba n'ọgba nke hel na ụlọ mkpọrọ nke ajọ omume gị. Ọ bụrụ na i soro Jizọs, ị ga - abụ onye na - ahụ n'anya, ịkwanyere Nna gị àmà. Ma ọ bụrụ na ị gaghị aghọ nwa Ya, ị ga - anọgide na - ejikọta na mmụọ na echiche ndị ọzọ na ịghọ onye iro Chineke.
Jizọs na-echetara gị ụgwọ nke ịnakwere Chineke ma ọ bụrụ na ị na-abanye na ya n'ezie. Ọdịnihu gị ga-esi ike ma na-egbu mgbu mgbe hell ga-agbawa megide Kraịst na ụmụazụ ya. Ụwa kpọrọ onye ọ bụla na-eso ụzọ Jizọs kwesịrị ntụkwasị obi asị; ya mere, ị ga - enweta Chineke dịka Nna ma ghọọ onye ọbịbịa na ụwa anyị maọbụ ị ga - abụ onye iro Chineke, ụwa na - anabata gị dịka otu nke ha. Ya mere họrọ n'etiti ndụ na ọnwụ ebighi ebi.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka ịhọrọ ọnwụ; ị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Nna gị. Kpochapu anyi na mmuo nke uwa ma gbanye anyi n'ime ima gi, ka anyi wee nwee ike iguzo dika umu Chineke. Ịhụnanya gị bụ ikike na nduzi anyị.
Gịnị kpatara ụwa ji kpọọ ndị kweere na Kraịst asị?